दुईसय एकचालीस आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा - pnpkhabar.com
When Your Partner Needs Treatment — But Won’t Get
You are at:Home»समाचार»दुईसय एकचालीस आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा
दुईसय एकचालीस आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा
By रबि धिताल on ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १२:३९ समाचार
काठमाडौँ, ४ जेठ: विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको छैटौँ दिनसम्म २४१ जना आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । आधार शिविरमा रहेका पर्यटन विभागका सम्पर्क अधिकृत तीलकराम पाण्डेका अनुसार आजमात्रै ६५ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । यसमा ३४ नेपाली र ३१ विदेशी रहेका छन् ।
आरोहणको पाँचाँै दिन बिहीबार २५ जनाले आरोहण गरेका थिए । वैशाख ३० गते आठ जना शेर्पा आरोहीबाट सगरमाथाको चुचुरोसम्म डोरी टाँगेपछि यस वर्षको पहिलो आरोहण शुरु भएको थियो । आरोहणको चौथो दिन बुधबार सबैभन्दा बढी ९४ जना सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए ।
यस वर्षको वसन्त ऋतुमा चार नेपालीसहित ३८ आरोही दलका ३६४ आरोही शिखर चुम्ने अभियानमा छन् । अबको तीन÷चार दिनभित्र सबै आरोही चुचुरोमा पुगिसक्ने बताइएको छ । अहिले बाक्लो संख्याका आरोही सगरमाथाको चुचुरो पुगेर धमाधम ओर्लने क्रममा छन् । चुचुरो चढ्ने र ओर्लने धेरै आरोही शिविर तीन र चारमा रहेको सम्पर्क अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो । सगरमाथाको आधार शिविरभन्दा माथि तेस्रो र चौथो शिविरमा धेरै आरोही अनुकूल मौसमको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
४ श्रावण २०७६, शनिबार २२:३४ 0
६ बैशाख २०७५, बिहीबार ०६:३७ 0
२०७५ सालमा बिबाह गर्दै हुनुहुन्छ ? जेठमा लगन जुरेन, मंसिरमा १ दिन मात्र हेर्नुहोस लगन सहित
४ पुष २०७४, मंगलवार ०१:५३ 0
संसद पुनर्संरचना गर्न अर्थले किन दिएन पैसा ?
५ माघ २०७४, शुक्रबार ०९:४७ 0
साङ्लाले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् साङ्ला भगाउने यी ४ घरेलु उपाय
२८ भाद्र २०७५, बिहीबार ०८:२१ 0
दुइ वटा सिम राख्न मिल्ने ३ नयाँ आइफोन बजारमा, हेर्नुहोस कति पर्छ मुल्य ?